H Beam Baoron'ny firafitry ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny famokarana mpanamboatra, mpamatsy - China H Beam baoron'ny rafitry ny vy loaka
Amin'ny alàlan'ny milina fanapoahana karazana tifitra ho an'ny rafitry ny vatosoa Strenthening
Ity milina fipoahana fitifirana ity izay antsoina amin'ny alàlan'ny milina fanapoahana fitifirana dia ampiasaina amin'ny lovia vy. Izy io dia afaka manamafy ny firafitry ny takelaka vy.
Ity milina ity dia mihatra amin'ny famoronana harafesina sy sary hosodoko eo amin'ny takelaka vita amin'ny vy, fizarana vy sy firafitry ny vy amin'ny fandefasana, fiara, moto, tetezana ary milina.
Ahorizontal H Beam Rust esory ny mofom-basy antsokosoko
Manala lenta amin'ny alàlan'ny baoritra voafatotra AHorizontal H Beam Rust
milina fipoahana fitifirana dia ampiasaina amin'ny vy lehibe toy ny vy vita amin'ny H, vy vita amin'ny vy, sns. afaka manaisotra ny harafesina, ny hoditra oxide, lasantsy slag, ny fanodinana fako sy ny sisa.
Q69 Amin'ny alàlan'ny milina fanapoahana karazana tifitra ho an'ny asa vita amin'ny aluminium Die Casting
Q69 Amin'ny alàlan'ny milina fanapoahana karazana tifitra ho an'ny famonoana vy vita amin'ny aluminium
Amin'ny alàlan'ny milina fipoahana baomba dia azo ampiasaina amin'ny fametrahana aluminium maty, afaka manala ny harafesina, hoditra oxide, fanenon-trondro, hoso-doko hako sy ny sisa.
Sarintany vita amin'ny sary vita amin'ny sary sy ny milina fanapoahana baomba izay fizarana ampiasaina amin'ny fanadiovana ny harafesaka eny ambonin'ny haben'ny rafitry ny vy.
Q69 Mandalo milina fanapoahana karazana tifitra amin'ny fikarakarana ny faritra vy
Q69 Mandalo amin'ny milina fanapoahana karazana tifitra amin'ny fitsaboana ny faritra misy ny vy vita amin'ny taon-dasa rehefa avy nivoatra sy nanatsara ny taona dia tonga tamin'ny ambaratonga fivoarana tany Chine ny vokatra.
Ny teknolojia fofonaina fasika dia nibodo toerana mitombo bebe kokoa ao amin'ny teknolojia fitsaboana atiny aluminium profil, izay maneho ny firoborobon'ny profil aluminium maoderina.
Aorian'ny fehim-pasika, ny mombamomba dia afaka manaisotra amin'ny fomba mahomby ny lesoka voa, mekanika lasantsy, voamadinika sy ny sisa, ary miara-miasa amin'ny teknolojia fitsaboana fanodinana loko, afaka mamatsy ny mombamomba ny hazavana sy ny lokon'ny fasika, ary afaka mivoaka koa izy io. traranao ny fihetseham-po mahatsiravina metatra na malefaka amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny tifitra vy izay misy habe misy habaka samihafa.
Lafatra vy vita amin'ny Q69 andian-dahatsoratra ho an'ny metaly vy vita amin'ny vy
Manala motera Fantsom-basy maloto avy hatrany H
Q69 series shot blasting machine dia ampiasaina ho an'ny vy lehibe toy ny H-varahina vita amin'ny vy, ny vilia vy, sns. Afaka manaisotra ny harafesina, ny hoditra oksizenina, lasantsy slag, ny hoso-doko fako sy ny sisa.
H-beam blast machine milina, dia ho an'ny milina fanoratam-bokotra roller type shot, indrindra amin'ny fananganana sy ny indostria hafa. Izy io dia ampiasaina amin'ny fanafoanana ny adin-tsaina sy ny fanalefahana ny fanadiovana ny rafitra vy miaraka amin'ny haben'ny vy ary ny vy vy.
nitifitra fatratra Spare Parts, Fanapoahana tsiro, Masinina fipoahana baomba, H miendrika basy mitifitra, Kodiarana fanapoahana tifitra, tifitra Peening Machine, Ny vokatra rehetra